Iplanethi iNeptune. Konke odinga ukukwazi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Neptune yiplanethi ekude kakhulu kunayo yonke eyethu Uhlelo lomkhathi. Ngemuva kwakhe kuphela "IPlanethi Pluto futhi i I-Oort Cloud, ephawula imikhawulo yohlelo lwethu lweSolar. Yiplanethi ekude kakhulu yazo zonke izigebenga zegesi (I-Jupiter, Saturn y I-Uranus). Ngenxa yokuthuthuka kwezesayensi nezibalo kwatholakala kusukela ekubikezelweni kwezibalo. Igama lalo livela kunkulunkulu waseRoma uNeptune futhi liqanjwe ngegama lombala oluhlaza okwesibhakabhaka futhi ngoba iNeptune iyinkosi yawo wonke amanzi.
Ngalesi sihloko ungafunda zonke izici zeplanethi iNeptune futhi uthole ezinye izifiso ezikhethekile. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngeplanethi yokugcina kuSolar System? Uma uqhubeka nokufunda ungafunda konke.
1 Idatha eyisisekelo
2 Inkambu kazibuthe nezindandatho zeNeptune
3 Amagesi nomoya
3.1 Amandla nezinguquko zomoya
Neptune Yiplanethi ekude kakhulu futhi ingeyesine emsileni weziqhwaga zegesi. Kokubili i-Uranus neNeptune yaziwa njengemidondoshiya ebandayo ngenxa yokuthi amazinga okushisa aphansi kakhulu ngenxa yebanga labo ukusuka eLangeni. Uma siyiqhathanisa namanye amaplanethi, ingeyesine ngobukhulu futhi kungokwesithathu ngobukhulu. Ubukhulu balesi sigebenga segesi bulingana nezikhathi eziyi-17 zeplanethi yethu.
Inobubanzi benkabazwe obungu-24.622 km futhi itholakala ebangeni elingu-4.498.252.900km ukusuka eLangeni. Ngokungafani neplanethi yethu, ethatha cishe amahora angama-24 ukuziphendulela yona (bheka Ukunyakaza kokujikeleza), lesi sikhondlakhondla sika-ayisikhilimu sithatha amahora ayi-16 kuphela. Kodwa-ke, umzila ozungeza iLanga ochaza ukudlula kweminyaka uba yinto yaphakade. Okusifanele unyaka owodwa (okuthatha isikhathi esingakanani ukuzungeza iLanga), kwiplanethi iNeptune yiminyaka eyi-164,8.
Ibizwa ngokuthi i-giant efriziwe ngoba izinga layo lokushisa eliphakathi nendawo ngama-degree angu--220 kuqhathaniswa ne-15 degrees emhlabeni wethu. Ukuba iplanethi enkulu kunoMhlaba, amandla ayo adonsela phansi e-equator ngu-11 m / s2.
Uma la maplanethi abizwa ngamagesi amakhulu akusho ukuthi aqukethe amagesi ngokuphelele. Umnyombo kaNeptune wenziwe ngedwala elicibilikile elinenhlanganisela yamanzi, i-liquid ammonia, negesi yemethane. Umbala ohlaza okwesibhakabhaka awubangelwa ubukhona bamanzi ebusweni, kepha igesi yawo enkulu esemkhathini yi-methane.
Inkambu kazibuthe nezindandatho zeNeptune
Uma sihlaziya amandla kazibuthe alesi sidlakela esineqhwa, siyakubona lokho Iqondiswe cishe ngama-degree angama-47 ukusuka eksisi lokujikeleza futhi yahamba amakhilomitha ayi-13.500 ukusuka enkabeni yayo. Kulokhu, akukhona ukuthambekela kweplanethi okwenza lokhu kuphambuka kwenzeke, kepha kunalokho ukuguquguquka okukhona ngaphakathi kwendaba nodaba lwegesi kwenza insimu ye-electromagnetic iphambuke.
Ngokuphikisana nalokho okungabonwa, uNeptune, njengoSaturn, unamasongo. Ubufakazi balokhu batholwa umkhumbi-mkhathi iVoyager II ngenkathi, ngo-1989, ikwazi ukuthwebula leplanethi futhi isondela emzileni wayo. Ngaphezu kwalokho, ayinayo kuphela izindandatho zesici, kunalokho inezinyanga eziyi-8. Lokhu kuyinto ephula amasu, inqobo nje uma sibheka izici zomhlaba njengokujwayelekile. Yize ekugcineni kosuku, akukho lutho olujwayelekile futhi olusungulwe ngaphambili, ngoba singabantu ababeka izigaba.
Yize kubonakala sengathi kukhona okwasungulwa, uNeptune ukwenzile uhlelo olwenziwe ngamasongo ama-4 amancane futhi ancanyana anombala othobekile. Lokhu yikho okwenza zingabonakali ngomkhawulo wokubona. Amasongo enziwe ngezinhlayiya zothuli ebezihlukanisiwe eminyakeni edlule kusuka ezinyangeni zangaphakathi. Lezi zingcezu ziye zahlanganiswa umphumela wamandla adonsela phansi futhi zahlukaniswa ezinyangeni zazo yimithelela yama-meteorite amancane.
Njengoba kungabonakala, njengoba uyisidlakela segesi, umoya waso uyisici esibalulekile okufanele usicabangele. Kungabonakala uma ubuso beplanethi buhlaziywa ngeso lenyama ukuthi inamabala afanayo neziphepho ezikhona eJupiter. Kodwa-ke, lezi zindawo azizinzile njengakwenye iplanethi, kodwa ziyakheka futhi zinyamalale ngokuhamba kwesikhathi. Lokhu kusisiza ukuba sibheke ubukhona beziphepho ezinamandla amakhulu kepha hhayi isikhathi eside.
Ubenayo okuthiwa yiGreat Dark Spot enobukhulu obufana nobeplanethi yethu, kodwa yanyamalala ngo-1994. Kamuva kwakheka enye. Lokhu kusinika ukuqonda ukwakheka okumnandi kweziphepho ezenzeka emkhathini. Kumele futhi kushiwo ukuthi imimoya evunguza eNeptune ibhekwe njengamandla kunawo wonke amaplanethi akha iSolar System. Eminingi yale mimoya ivunguza iye kolunye uhlangothi lapho izungeza khona.
Njengeqiniso elithandekayo, ezindaweni eziseduze naleyo Great Dark Spot imimoya efinyelela ku-2.000 XNUMX km / h ingaqoshwa. Mhlawumbe, umuntu ongaphansi kwale mimoya, ufa ehudulwa futhi ehlaselwa yingcindezi yomoya.
Amandla nezinguquko zomoya
Izithombe zale planethi ezincwadini nasemibhalweni ziyashintsha eminyakeni edlule, ngoba ayinakekelwa ngendlela efanayo. Amabala akhiwe futhi aqedwa aguqula i-morphology esibona ngayo iplanethi. Mayelana namazinga okushisa, amazinga okushisa abephansi kakhulu kangangoba abe azungeze ama-degree angama--260, ngenkathi useMhlabeni, okurekhodwe okuphansi kakhulu kungu -90 degrees.
Ukwakheka komkhathi kuqukethe i-hydrogen ne-helium ngesilinganiso esikhulu kanti enye i-nitrogen isiyonke. Yonke indawo esingayithola izindawo ezineqhwa lamanzi, i-methane ne-ammonia ice (Kula mazinga okushisa aphansi amagesi ayaqandisa). Amafu awasiwo umusi wamanzi, ngoba awukho umphunga kulawo mazinga okushisa. Zenziwe nge-methane efriziwe futhi zishintsha ngokushesha okukhulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeNeptune nezimpawu zayo ezikhethekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Iplanethi iNeptune
Umlando we-Max Planck